Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany – MADAGASIKARA – Page 3 – Ny Teny tonga Nofo, Nofo tonga Mofo, Mofo zary Aina
« Mba ho famantarana ny maha mpanompo ny Eglizy anie ny fijoroan’ny Diakra amin’ny fanomezam-pahasoavana hitory ny Tenin’Andriamanitra sy hanompo ny mahantra ».
Ho an’ireo Diakra indray no iompanan’ny fangatahana anentanan’ny Papa Ray Masina ny vita Batemy rehetra mandritra ny volana Mey, amin’ny vavaka fanolorana ny andro izay atao isan’andro. Ny Diakra izay manana anjara toerana manokana eo amin’ny fandraharahana sy ny fiainam-piangonana, noho izy ao anatin’ny ambaratongan’ny sakramentan’ny Filaharana.
« Amin’ny laharana zandriny eo amin’ny ambaratongam-pitondrana no misy ny Diakra izay « tsy ho an’ny maha-mpisorona tsy akory, fa ho an’ny fanompoana » no ametrahan-tanana aminy » (KFK 1569).
Asongadin’ny fampianaran’ny Eglizy ao amin’ny Katesizin’ny Fiangonana Katolika hatrany fa : « Mandray anjara amin’ny fomba manokana ny Diakra, amin’ny fanirahana an’i Kristy sy amin’ny fahasoavany. Ny sakramentan’ny Filaharana no mampisy marika azy ireo amin’ny fitomboka (“marika”) izay tsy misy afaka manafoana izany, sy mampitovy endrika azy ireo amin’i Kristy izay nanao ny Tenany ho “Diakra”, izany hoe mpanompon’ny rehetra. Azo singanina manokana amin’izany ireto asan’ny Diakra ireto : manampy ny Eveka sy ny Pretra amin’ny fankalazana ny misterin’Andriamanitra, indrindra ny Eokaristia, mizara izany, … mahafoy tena amin’ny asam-pitiava-namana isan-karazany » (KFK 1570).
Ny lahatenin’ny Eveka amin’ny fanamasinana ho Diakra dia mbola manamafy ny andraikitra masina ankinina amin’izy ireo : « Eo amin’ny toriteny sy eo amin’ny ôtely ary eo amin’ny fiahiana ny ory sy ny mahantra, hanompo ny olona rehetra » araka ny fomba nolovana tamin’ny apostoly. Fanampin’izany, araka ny anirahan’ny Eveka azy, dia adidiny ny mampianatra ny olona mpino, na ny tsy mpino, sy ny mivaofy na manazava ny fampianarana masina
Mpandraharaha voahosotra ho amin’ny lahasa fanompoana ny Fiangonana àry ny Diakra ; tsy mandray ny fisoronana maha-mpandraharaha voahosotra izy, kanefa ny fanamasinana dia manome azy anjara raharaha mavesa-danja amin’ny andraiki-panompoana ny Teny, amin’ny fanompoana an’Andriamanitra, amin’ny fitantanana pastôraly ary amin’ ny asa fanompoana am-pitiavana ny hafa, lahasa izay tsy maintsy tanterahiny eo ambany fahefana maha-mpiandry ondry ny Evekany.
Adidintsika kristianina àry ny mivavaka ho an’ireo Diakra, fa efa nanome ohatra azy ireo i Kristy ; izany hoe ho tena mpanompo marina tokoa, mpanao raharahan’i Kristy, ilay nilatsaka ho mpanompo teo anivon’ny mpianany ; mba ho tena hanompo am-pitiavana. Sahala amin’ireo nofidin’ny Apostoly fahiny hiandraikitra ny fiahiana ny ory sy ny mahantra, ka ho olona tsara laza, henika ny Fanahy Masina ary feno fahendrena.
Mba hahazo fanampiana sy fanohanana amin’ny ezaka ataony anie ireo te hiala amin’ny filàna mangeja isan-karazany.
Anisan’ny loza lehibe mandrava sy manapotika ny fiainan’ny olombelona ny fahazaran-dratsy izay miteraka filàna mangeja, mitondra mankany amin’ny fiankinan-doha. Rehefa tsy voafehy intsony mantsy ny filàna ao anatin’ny saina amam-batan’ny olombelona ao, dia mitarika azy ho any amin’ny fiankinan-doha amin-javatra izay iantefan’ny filàny. Maro ankehitriny ny olona tafalatsaka ao anatin’izay fiankinan-doha izay, ary tsy ny tanora ihany fa hatramin’ny olon-dehibe koa aza. Inona moa ireo karazana filàna na fiankinan-doha manimba sy mitera-doza ireo : ny fisotroan-toaka, ny fidorohana zava-mahadomelina, ny fijangajangana, filokana sns ; fa mety ho fiankinan-doha ihany koa, ny fijerena tahitalavitra tafahoatra, ny internet, ny fanaovana facebook tsy voafehy na tsy voalanjalanja. Ny hatendan-kanina sy ny filerana ihany koa aza, araka ny voalaza ao amin’ny fahotana fito fototry ny hafa, dia azo lazaina fa filàna diso tafahoatra ka miteraka fahotana sy haratsiana maro.
Tsy vitsy ny olona ankehitriny, hoy isika, no tafalatsaka ao anatina fitongilanana na fiankinan-doha toy izany. Ny tena loza anefa dia tsy mijanona ho an’ilay manana io fironana io ihany ny vokadratsiny fa miantraika amin’ny hafa sy ny fiaraha-monina manodidina mihitsy. Toy ny virus ka manimba fiaraha-monina. Toa zary potika ny toetra soa sy ilay endrika itovizana amin’Andriamanitra. Toa tsy manam-pahafahana intsony fa voageja ao anaty fitiavan-tena.
Na izany aza dia misy ihany ny mahatsapa tena fa tafalatsaka anaty hantsana, diso lalana, ka te hanao toy ilay zaza mpandany, hiverina an-tranon-dray. Te hioitra sy hiezaka hanarina ny toe-piainana ; hiala amin’ny fahazaran-dratsy sy ny fiankinan-doha mamohehatra. « Ato anaty hantsana aho, Tompo, no miantso Anao ; Tompo ô, henoy izany feoko », hoy ny Salamo faha 129. Maro amin’ireny olona ireny no te ho afaka amin’izany fahazaran-dratsy izany, nefa tsy afaka, fa sarotra ho azy ny miala satria efa tafalatsaka anaty loatra, ka mila olona hanampy.
Adidin’ny tsirairay, ny vita Batemy, ny tsara sitrapo rehetra, indrindra fa ny Eglizy, ny manampy azy ireny hiala amin’ny filàny sy ny fahazaran-dratsiny ; mba hotafarina indray ka hanjary olona afaka toy ny rehetra.
Izany no anentanan’ny Papa Ray Masina antsika amin’ny fanampiana azy ireny, ary tsy ny hitrotro am-bavaka fotsiny, fa hanana fahasahiana hanarina azy indray, na ara-torohevitra izany, na ara-toetsaina. Hitantsika fa ny Papa Fransoa mihitsy no manome ohatra velona ho antsika amin’ny fanatonana sy fankaherezana ireny olona ireny, na amin’ny hafatrafatra sy ny fampianarana ataony izany, na amin’ny fanampiana ara-nofo ihany koa. Hoy indrindra izy, ao amin’ilay atao hoe « vidéo du Pape », raha manentana ny olona ny amin’izany : « Ataoko fa tsy isalasalana ny nandrenesanareo ny amin’ny resaka fiankinan-doha. Ary moa mba heverinareo ihany koa ny fiankinan-doha amin’ny filokana, ny sary mamoafady, ny internet sy ny voadratsy ateraky ny elanelana virtoaly ? Amin’ny alalan’ny Evanjelin’ny Famindram-po no ahafahantsika manamaivana sy mitsabo ary manasitrana ny fijaliana mifandray amin’ireo fiankinan-doha vaovao ireo. Mivavaka àry isika mba hahazo fanampiana sy fanohanana amin’ny ezaka ataony ireo te hiala amin’ny filàna, ny fiankinan-doha mangeja isankarazany » (Vidéo du Pape, mois d’Avril 2020).
Dikateny ofisialy :VPKT
Miantso antsika rehetra hiombom-bavaka amin’ny Papa François ho an’ireo firenena tratran’izany. I Jesoa Kristy Tompo nibaby ny rofintsika rehetra ka nandresy ny ratsy tamin’izy nitsangan-ko velona anie, hanome hery ireo marary sy ireo mpitsabo, ary ny fianakaviany. Ary ankinintsika amin’ilay Ray be famindrampo ny fanahin’ireo havantsika namoy ny ainy.
Manasa antsika hifampilaza ny tokony hatao na any amin’ny toeram-pitsaboana na any am-piangonana na any am-pianarana na eny an-dàlana…
Mankahery ireo dokotera sy ny mpiasan’ny fahasalamana hanana ny herim-pon’ny aleoko maty mba handresena ny aretina fa tsy hanary na handositra ny marary.
Miantso antsika ho sahy hifanampy, hifampiaro, fa indrindra hiaro ireo efa manana aretina mitaiza na ireo mahantra tsy manana fiarovana.
Miantso ny Eveka, ny pretra, ny relijiozy sy ny mpikatroka rehetra amin’ny sehatra pastoraly katôlika tsy hatahotra fa hanaiky hanatona sy hikarakara amim-pitandremana ireo marary ary hiara-miasa amin’ireo hôpitaly rehetra hiara-hanohitra ny aretina.
Manasa antsika rehetra izahay Biraon’ny Fivondronamben’ny Eveka mba hiombona ka hanao vavaka hasivianandro manomboka ny 19 martsa Fankalazana manetriketrika an’i Masindahy Josefa mpiaro ny Fianakaviana Masina sy izao tontolo izao ka hifarana amin’ny faha-27 martsa. Tafiditra ao anatin’izany hasivianandro izany indrindra ny 24 ora ho an’ny Tompo hiombonam-bavaka amin’ny Eglizy manerantany (ny 20-21 martsa) sy ny Fankalazana manetriketrika ny Filazàn’ny Anjely ny Fahatongavan’ny Zanak’Andriamanitra ho nofo (25 martsa).
Inona àry no hataontsika amin’izany?
Hiaraka hanao ny Raozery masina isika, ilay vavaka nahomby tamin’ny fiarovana ny Eglizy rehefa nisy fahavalo nitady hanapotika an’i Roma, ka nahatonga ny Papa Pio faha 5 nametraka ny datin’ny 7 oktôbra ho fanajana ny Mpanjakavavin’ny Raozery Masina.
Vavaka tena tsotra izany ary azon’ny rehetra atao amin’ny toerana rehetra. Koa ampirisihina manokana ny isam-pianakaviana, ny mpamonjy lamesa isan’andro, hanao sapile miaraka ka faranana amin’ity vavaka ity :
– Masina Maria notorontoronina tsy azon-keloka, Mpiaro an’i Madagasikara, mivavaha ho anay izay mangata-bonjy aminao
– Masina Maria fahasitranan’ny Marary, sitrano ny marary rehetra
– Md Josefa, Ray mpitaiza an’i Jesoa, mpiaro an’izao tontolo izao, mivavaha ho anay
– Md Jacques Berthieu, mivavaha ho anay
– Victoire Rasoamanarivo Olontsambatra, mivavaha ho anay
– Raphael Louis Rafiringa Olontsambatra, mivavaha ho anay
– Jean Beyzim Olontsambatra, mivavaha ho anay
– Lucien Botovasoa Olontsambatra, mivavaha ho anay
Ny Biraon’ny Fivondronam-ben’ny Eveka eto Madagasikara
Ny Kardinaly Désiré TSARAHAZANA, Filohan’ny FEM.
De Admin dans la catégorie Hafatra, Vaovao
« Mihanta aminareo amin’ny anaran’i Kristy izahay : mihavàna re amin’Andriamanitra ianareo ! » (2 Kor 5, 20)
Amin’ity taona ity indray, mbola manome fotoana tsara ho antsika ny Tompo mba hiomanantsika hankalaza amin’ny fo vaovao ny Mistery lehiben’ny fahafatesana sy ny fitsanganan-ko velon’iJesoa, vato fehizoron’ny fiainana kristianina manokana sy iombonana.Tsy maintsy miverina amin’io Mistery io ny fo sy ny fanahintsika. Izany tokoa, tsy mitsahatra mitombo ao amintsika io mistery io, raha toa ka avelantsika hiasa ao amintsika ny heri-panahiny ary miditra ao aminy isika amin’ny alalan’ny valin-teny tsotra amin-kahalalam-po.
1. NY MISTERIN’NY PAKA, FOTOTRY NY FIBEBAHANA:
Ny hafaliana kristianina dia miainga amin’ny fihainoana sy ny fandraisana ny Vaovao Mahafalin’ny fahafatesany sy ny fitsangana-kovelon’I Jesoa: ny kerygma. Izy no mamintina ny Misterim-pitiavana « tena misy, tena marina, tena azo tsapain-tanana izay manolotra antsika fifandraisana avy amin’ny fifanankalozana marina sy mahavokatra » (Exhort. Ap. Christus vivit, n° 117). Izay mino ny filazana, dia mandà ny lainga izay milaza fa isika ihany no fototry ny fiainantsika, marina dia amirapiratan’ny fitiavan’Andriamanitra Ray izy, ny sitrapony te hanome aina antsika be dia be (jereo Jn 10, 10). Ankoatr’izany, raha mihaino ny feo mampitolagagan’ « ny rain’ny lainga »isika (Jn 8, 45), dia hilentika anatin’ny hantsan’ny hadalana, hiaina ny afobe dieny ety ambonin’ny tany, toy ny asehon’ireo tranga maro mampitaintaina, indrisy, eoamin’ny traikefam-piainan’ny olombelona manokana sy iombonana.
Amin’ity Karemy 2020 ity, tiako, noho izany, ny hampiely amin’ny kristianina rehetra, izay efa nosoratako ho an’ny tanora tamin’ny taratasy fanentanana apôstôlika Christus vivit, Velona i Kristy : « Jereo ny Tanana miampatr’i Kristy voafantsika, meteza ho avotany indray, ary ho avotany. Ka rehefa manatona Azy ianao hiaiky ny fahotanao, dia minòa marina tokoa ny famindram-pony izay manafaka anao amin’ny fahadisoana. Banjino ny rà nalatsany tamim-pitiavana lehibe ary meteza ianao hodiovina amin’ny alalany. Mety hateraka ho vaovao indray ianao amin’izay » (n°123). Tsy zava-niseho efa lasa ny Pakan’i Jesoa : noho ny herin’ny Fanahy Masina, mbola mitoetra ankehitriny izany ary ahafahantsika mijery sy mahatsapa amim-pinoana ny nofon’i Kristy amin’ireo olona mijaly.
2. ILAINA MAIKA NY FIBEBAHANA:
Mahavonjy ny mibanjina lalina ny Misterin’ny Paka fanavotana, izay nanomezana antsika ny famindram-pon’Andriamanitra. Ny fiainana ny famindram-po, noho izany dia tsy tomombana raha tsy« mifanatrika » amin’ny Tompo nofantsihana sy tafatsangan-kovelona « izay efa tia ahy, sy nanolo-tena hamonjy ahy » (Ga 2, 20). Ny fifampiresahana amin’ny fo, eo amin’ny samy mpinamana. Izany indrindra no maha-zava-dehibe ny vavaka amin’izao vanim-potoanan’ny Karemy izao. Ka alohan’ny maha-adidy azy, dia maneho ny filàna ny fifandraisana amin’ny fitiavan’Andriamanitra izay mitarika antsika sy manohana antsika mandrakariva. Araka izany, mivavaka ny kristianina amin’ny fahatsapany fa tiana izy na dia eo aza ny tsy fahamendrehany. Miseho amin’ny endrika maro ny fivavahana, nefa ny zava-dehibe eo imason’Andriamanitra, dia izy maninteraka ao amintsika mandra-pahazoany ny hamafisan’ny fontsika, mba hampibebaka azy mandrakariva ao aminy sy araka ny sitrapony.
Amin’ity fotoana tsara ity, meteza ianareo araka izany ho tarihana toa an’Israely tany an-tany efitra (Jereo Os 2, 16), mba hahahafahantsika mandre ny feon’ilay Vady masina, mba hampanako ao amintsika lalina kokoa sy ho vonona mandrakariva. Arakaraka ny hanekentsika hiasan’ny Teniny, no hahafahantsika mianoka ny indrafony maimaim-poana ho antsika. Aza avelantsika ho very maina izao fotoam-pahasoavana izao, anatin’ny fihamboana fa isika no tompon’ny fotoana sy ny fomba ibebahanantsika Aminy.
3. NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA MIREDAREDA HIFAMPIRESAKA AMIN’NY ZANANY :
Ny fanomezan’Andriamanitra antsika, fanampiny indray, ny fotoana tsara hibebahantsika, dia tsy tokony hatao antsirambina velively. Ity fotoana vaovao fanararaotana ity no tokony hamohafoha ao amintsika ny fahaiza-mankasitraka sy hanaitra antsika amin’ny fahalainana. Na dia eo aza, indraindray mampitaintaina,ny ratsy eo amin’ny fiainantsika sy ao amin’ny fiainan’ny Fiangonana ary ny fiainan’izao tontolo izao, io sehatra nomena mba ho fiovan’ny tanjona io dia maneho ny sitrapon’Andriamanitra maharitra mba tsy hanapaka ny fifanakalozam-pamonjeny amintsika. Ao amin’I Jesoa voafantsika, izay « natao ota ho antsika » (2 Kor 5, 21), Tonga amin’ny fotoana hamarinana ny fahotantsika amin’ny Zanany ity sitrapo ity, hany ka « hampivadika an’Andriamanitra amin’ny tenany izy », araka ny nolazain’ny Papa Benoît XVI (Jereo Enc. Deus caritas est, n°12). Araka izany, tia ireo fahavalony koa Andriamanitra (jereo Mt 5, 43-48).
Ny resaka tian’Andriamanitra haorina miaraka amin’ny olombelona amin’ny alalan’ny Misterim-panavotan’ny Pakan’ny Zanany dia tsy toy izay natolotra ny mponina tany Atena, izay « tsy nandany andro afa-tsy tamin’ny filazana na fihainoana zava-baovao » (Ac 17, 21). Io karazana resabe, avy amin’ny fahalianana tsy misy fotony sy misavoamboana io, no mamaritra ny maha-izao tontolo izao amin’ny fotoana rehetra sy amin’ny androntsika, ary mety hifamoivoy koa ao anatin’ny fampiasana mamitaka ny fitaovam-pifandraisana.
4. NY HARENA HO ZARAINA FA TSY HANGONINA HO AN’NY TENA:
Mametraka ny Misterim-panavotana ao anivon’ny fiainana dia midika fa mahatsapa fangorahana ny ferin’i Kristy voafantsika iainan’ireo olona iharan-dozamaro tsy manan-tsiny noho ny ady, ao anatin’ny herisetran’ny fiainana, nanomboka hatrany an-kibon-dreny ka hatramin’ny fahanterana, amin’ny endriky ny herisetra tsy tambo isaina, ny loza momba ny tontolo iainana, ny fitsinjara-mitanila amin’ny haren’ny tany, ny famarotana olona amin’ny endrika rehetra sy fikatsahana tombontsoa miompampana izay endrika fanompoan-tsampy.
Ankehitriny ihany koa,dia zava-dehibe ny manao antso avo amin’ny lehilahy sy vehivavy rehetra tsara sitrapo mba hizara ny hareny amin’izay tena mila izany amin’ny fanaovana asa fiantrana, toy ny endriky ny fandraisana anjara manokana amin’ny fanorenana tontolo ara-drariny. Ny fizarana am-pitiavana no mahatonga ny olona ho tena olona kokoa, fa ny fanangonana dia mety hahadonto azy, amin’ny fikombonana anatin’ny fitiavan-tena.
Afaka ary tsy maintsy mandeha amin’ny lavitra kokoa isika, eo am-piheverana ny lafim-pandaminana ara-toekarena. Noho izany, amin’izao Karemy 2020 izao, manomboka ny 26 hatramin’ny 28 mars, dia antsoiko ho any Assise ny tanora mpahay toekarena, ny mpandraharaha sy mpitondra fanovàna, mba handray anjara amin’ny famolavolana kisarisarin’ny toekarena ara-drariny kokoa sy hafa kokoa noho ny ankehitriny. Araka ny averimberina matetika aoamin’ny Fampianaran’ny Fiangonana, ny pôlitika no endrika ambonin’ny fitiavana (Jereo. Pie XI, Discours aux Membres de la Fédération Universitaire Catholique Italienne, 18 décembre 1927). Toy izany koa ny fitantanana ny toe-karena, mifototra amin’io toe-panahin’ny Evanjely io izay toe-panahin’ny fahasambarana.
Italahoako ny vavak’i Maria Virjiny Masina mandritra izao Karemy ho avy izao mba handraisantsika ny antso hanaiky hihavanana amin’Andriamanitra, hampiraikitra ny fijerin’ny fontsika amin’ny misterin’ny Paka sy hibebahantsika amin’ny fifampiresahana misokatra sy marina amin’Andriamanitra. Noho izany indrindra no hahafahantsika ho tonga, araka ny nolazain’i Kristy tamin’ny mpianany : « fanasin’ny tany sy fahazavan’izao tontolo izao » (Mt 5, 13-14)
Nomena tao Roma, Fiangonana Md Joany tao Latran, 07 oktobra 2019
Fetin’i Masina Maria, Mpanjakavavin’ny Raozery.
« Mba haharitra amin’ny fiainana ny Evanjely sy hihamatotra anie ny fiombonan’ny Eglizy any Chine ».
Mitodika manokana amin’ny Eglizy any Chine ny fangatahana ampanaovin’ny Papa antsika kristianina mandritra ity volana Marsa ity. Ny Eglizy any Chine izay tsy nitsahatra ny nandalo sedra sy fahasahiranana nandritra ny taona maro ka mandraka ankehitriny.
Ara-tantara tokoa manko dia mizara roa miavaka tsara ny Eglizy katôlika any Chine : ny Eglizy ôfisialy sy ny Eglizy miafina na an-tsokosoko izay antsoina ihany koa hoe Eglizy ambanin’ny tany. Ny antsoina hoe Eglizy ôfisialy dia ny Eglizy mifandray mivantana amin’ny Fanjakana Sinoa sy amin’ny antoko kômonista ; amin’ny maha ôfisialy azy dia io Eglizy io ihany no eken’ny fitondram-panjakana hijoro ara-dalàna, ka na dia ireo mpitondra fivavahana ao aminy, toy ny Eveka sy ny Pretra aza, dia miankina amin’ny fanjakana Sinoa ny fijoroany sy ny fankatoavana azy. Azo lazaina fa saika tsy dia misy fifandraisana firy amin’ny Foiben’ny Eglizy any Rôma ity Eglizy ôfisialy ity, na dia ambara ho katolika aza, ary na misy aza izany dia ho voaramason’ny Fanjakana sy ho voafetra ihany. Ny Eglizy miafina na an-tsokosoko kosa dia ny fitambaran’ireo kristianina sy mpitondra fivavahana (Pretra, Eveka…) tsy manaiky ny fangejana sy ny fanenjehana ataon’ny Fanjakana Sinoa, noho izy mitana sy manaraka hatrany ny lovam-panahy ao amin’ny Eglizy katolika, eo ambany fahefan’ny Papa Ray Masina. Azo ambara izany fa raha eo anatrehan’ny Eglizy katolika maneran-tany miombona amin’ny Papa, dia ny Eglizy miafina no ara-dalàna sy miorina kokoa amin’ny maha katolika azy noho izy mandray sy mankato ary mitana ny soridalana apôstôlika avy amin’ny Papa.
Tsy mahagaga raha vitsy ny kristianina any amin’io firenena anisan’ny be mponina indrindra eran-tany io. Tsy mametraka firy ny fivavahana, indrindra ny kristianisma, ho zava-dehibe i Chine. Voafaritry ny lalam-panorenana ny fivavahana any. Anisan’izany, ohatra, ny tsy fahafahana manorina Fiangonana. Mahavoasazy na maha voaheloka ho faty mihitsy aza ny tsy fanarahana ny lalàm-panjakana mikasika ny fivavahana. Izany no antony andrenesantsika amin’ny alalan’ny fampitam-baovao ny fisian’ireo Eveka sy Pretra voaheloka an-tranomaizina, noho ny fanenjehan’ny Fanjakana azy ireo.
Na eo aza anefa izany fisarahan’ny Eglizy any Chine izany dia tsy mitsahatra ny mikatsaka izay hamahana ny olana ho amin’ny fampiraisana tanteraka ny Eglizy eo ambany fahefan’ny Papa, ary tsy ny Papa Fransoa ihany fa hatramin’ireo Papa nifandimby dia samy nitady sy nikatsaka izay ho fampiraisana. Toraka izany koa ireo mpitondra fivavahana any an-toerana, toa an-dry Mgr Jin Luxian, evekan’i Shanghai avy amin’ny Eglizy ofisialy, dia izao no nambarany: “Te-hilaza aho fa iray ihany ny Eglizy Katôlika any Chine. Tsy roa fa iray ihany: rômana, Katôlika ary apôstôlika. Mankato ny Papa daholo isika. Mitovy ny finoantsika rehetra, isika dia Katôlika rômana daholo. Tsy mbola nampianatra ivelan’ny teny finoana izahay”. Noporofoin’ny Papa Fransoa ihany koa, tamin’ny fanasany ireo eveka Sinoa roa lahy handray anjara tamin’ny sinôdan’ny Eveka tamin’ny oktobra 2019 ny maha iray ny Eglizy Katôlika. Toraka izany ihany koa tamin’ny Hafatra apôstôlika nalefan’ny Papa Fransoa ho an’ny mpino Katôlika Sinoa sy ho an’ny Eglizy maneran-tany (26 Septambra 2018), dia mametraka mazava ny fiainana ankafaliana ny Evanjely izay fototry ny fiombonana sy ny maha iray ny Eglizy ao amin’i Kristy ny Papa.
Mba hohenoina sy hoheverina anie ny tarainan’ireo mpifindra monina vokatry ny fanondranan’olona mamoafady satria mbola mpiray tampo amintsika izy ireo.
Anisan’ny mampiavaka ny Papa François amin’izao fitondrany sy fiahiany am-panahy ny Eglizy izao, amin’ny alalan’ny fampianarana ataony, ny fanentanana sy fampirisihana ny kristianina sy ny tsara sitrapo rehetra, indrindra ireo manana andraikitra manokana amin’ny fiainam-pirenena, amin’ny fandraisana an-tanana sy fiahiana ara-tsosialy ny mpifindra monina.
Antony maro tokoa mantsy ankehitriny no mahatonga ny olona hifindra monina. Ao, ohatra, noho ny antony ara-pivelomana, ao kosa noho ny antony ara-pandriampahalemana, tsy milamina ny tany noho ny asan-jiolahy sy ny ady isankarazany ; hany ka voatery miala ny toeram-ponenana sy mandao ny tanindrazana mihitsy azy ny maro amin’izy ireny. Fa ao ihany koa ireo mpifindra monina vokatry ny fivarotana olona na fanondranana olona tsotra izao, izay azo lazaina fa mbola miseho amin’ny endrika samihafa ihany koa ary ambara aza fa tena mamoafady mihitsy satria ny soatoavina maha olona manontolo mihitsy no potika sy rava.
Mihamahazo vahana sy mihanaka tokoa ity fomba ratsy mamohehatra sy mamoafady ity ankehitriny, indrindra aty amin’ny tany an-dalam-pandrosoana sy mahantra toa an’i Madagasikara. Hita sy re ombieny ombieny amin’ny alalan’ny fitaovan-tserasera sy ny boky aman-gazety ny fijaliana sy fahasahiranana ary ny taraina mianjady ami’ireny olona ireny.
Efa misy ihany ny ezaka sy ny vahaolana atao eo anivon’ny Firenena mikambana sy ireo firenena voakasik’izany mivantana, amin’ny ady atao hamongorana ity fanondranana olona amin’ny fomba mamoafady ity. Tsy mijanona fotsiny amin’ny famongorana na fanafoanana fotsiny anefa ny ezaka atao fa eo ihany koa ny fiahiana ara-tsosialy sy ny fitsinjovana ny maha olona an’ireo mpifindra monina ireo.
Manoloana izany indrindra, ny Papa François amin’ny maha Mpiandry ondry sady Mpampianatra, solontenan’i Jesoa Kristy azy, dia tsy mitsahatra ny manentana sy manantitrantitra ny tokony hitsinjovana ary hiahiana ireny olona ireny. Hoy indrindra izy raha manentana sy mampirisika ny olona handray ireo mpifindra monina : « Raiso, arovy, karakarao ny mpifindra monina sy mpitsoa-ponenana » ( Hafatry ny Papa François ho an’ny andro maneran-tany momba ny mpifindra monina sy mpitsoa-ponena 2018).
Izany dia hamafisiny amin’ny tenin’ny Soratra Masina : « Raha misy vahiny tonga miara-monina aminareo, eo amin’ny taninareo, aza mampahory azy. Fa ataovy toy ny tompon-tany ihany no fitondra ny vahiny mitoetra eo afovoanareo, tiavo toy ny tenanareo izy, fa efa mba vahiny tany amin’ny tany Ejipta koa ianareo. Izaho no Tompo Andriamanitrareo » ( Fanisana 19, 33-34).
Ny Fampianaran’ny Eglizy momba ny sosialy sy fiaraha-monina ihiany koa moa dia manantitrantitra fa : « tokony horaisina araka ny maha olona azy ny mpifindra monina ary ampiana izy hiditra ao amin’ny fiaraha-monina« .